Mogadishu Journal » 2021 » April » 28
Ronald Koeman ayaa sheegay “inuusan wax xiiso ah u hayn” warar dheeri ah oo ku saabsan mustaqbalka Lionel Messi iyadoo Barcelona ay u dagaallameyso hanashada horyaalka LaLiga. Sida laga soo xigtay TNT Sports, Paris Saint-Germain ayaa isku diyaarineysa dalab qandaraas “aan laga...
Wasiirka Warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timacadde ayaa sheegay in shirka uu Farmaajo ku baaqay aysan tegayn illaa inta ay martiqaad ka helayaan Beesha Caalamka. Wasiirka ayaa ku baaqay in Beesha Caalamku diyaariso shir ku saabsan Arrimaha doorashooyinka Soomaaliya,...
(Sawirro) Rooble oo kulan la leh Qoor-qoor, Guudlaawe, Musharaxiin iyo siyaasyiin kale
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan leh caawa madaxweyneyaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta. Xubnaha ka qeyb galaya kulankan waxaa ka mid ahaa Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullahi Xuseen...
Senatar Qeybdiid oo digniin ka soo saaray Kulanka Baarlamanka ee Sabtida
Muqdisho:-Senatar Cabdi Xassan Cawaale (Qeybdiid) ayaa uga digay Guddoonka Golaha Shacabka iyo Xildhibaanada inay qaadaan talaabooyin ka dhan ah go’aankii Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxda dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle kaga soo horjeesteen muddo kororsiga. Waxa...
Xukun lagu riday ninkii ka Dambeeyay dilka iyo Kufsiga Xamdi Maxamed Faarax
Muqdisho:-Maxkamada Gobolka Banaadir oo dhoor bilood gacanta ku heysay kiiska Xamdi Maxamed Faarax oo dil iyo kufsi la sheegay in sanadkii hore loogu geestay Hoteel kuyaala degmada Waabari ee gobolka Banaadir ayaa go’aan kasoo saartay kiiskaasi. Kiiska Xamdi Maxamed Faarax ayaa...
Mid kamid ah shaqaalada xawaaladda TAAJ oo lagu dilay dalka Mareykanka
Kooxo hubeesan aan heebtooda wali la aqoonsan ayaa xaafada Cedar ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku dilay wiil dhalinyaro Soomaali ah oo ka shaqeenayay xawaalada Taaj. Burcad hubeesan oo dooneysay in ay dhacaan xawaalada TAAJ ayaa la sheegay in gudaha u galeen...
Qarax gaari loo adeegsaday oo ka dhacay Muqdisho iyo Faah faahino kasoo baxaya
Muqdisho:-Qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa saakay waabarigii ka dhacay Xeendaabka xerada Asluubta ee ku dhaw Isgooska Ex-Koontarool Afgooye ee magaalada Muqdisho. Sida aan wararka ku helnay gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu...
Citing national security concerns, the Buddhist-majority island nation’s cabinet clears proposal to ban full-face veils in public. 28 Apr 2021 Sri Lanka’s cabinet has approved a proposed ban on wearing full-face veils including Muslim burqas in public, citing national security...
Xildhibaanada dalka ka maqan oo loogu baaqay in si deg deg Muqdisho ku yimaadaan
Gudoomiyaha golaha shacabka ee Baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday Maxamed Mursal Sheekh ayaa iclaamiyay fadhi aan caadi aheyn oo maalinta sabtida ah ay isugu imaanayaan Xildhibaanada si ay uga laabtaan mudo kororsigii ay sameesteen. Mursal ayaana ugu baaqay Xildhibaanada dalka...
Farmaajo oo caawa Ogolaaday in laga laabto Mudo kororsi dalkana ka dhacdo Doorasho Dadban
Muqdisho:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo caawa si toos ah ula hadlay Shacabka Soomaaliyeed ayaa uga booga dhayey walaac xooggan ee ay ka qabeen xaaladaha taagan, doorashada iyo mustaqbalka dalka. Madaxweynaha ayaa ka...